Filipina: Topimason’ireo mpitoraka blaogy amin’ny olana mianjady amin’ireo tantsaha · Global Voices teny Malagasy
Filipina: Topimason'ireo mpitoraka blaogy amin'ny olana mianjady amin'ireo tantsaha
Voadika ny 04 Aogositra 2010 22:10 GMT
sary avy amin'i Photoblogger.
Any ambanivohitr’ i Filipina, ny ankamaroan'ireo tantsaha dia mbola miaritra ny fomba fahiny noho ny fakana ampahany betsaka ihany ary taratra amin'ny tsy fisian'ny fitaovam- baventy ny fahabangan'ny fivoarana eo amin'ny sehatry ny fambolena, ary eo ihany koa ny faharatsian'ireo làlana mampitohy ireo toeram-piompiana sy ny tsena.
Tamin'ny volana lasa teo, nisy mpitoraka blaogy Filipiana vitsivitsy nandray anjara tamin'ny fitetezana ara-barotra any amin'ny faritry ny tendrombohitra manodidina ny tanànan'i Cebu izay manana fifandraisana amin'ny “Kumprahan Supermerkado,” tetik'asa karakarain'ny vondrona fandraharahana any an-toerana izay mikendry ny hammpifandray ny tantsaha any ambanivohitra sy ny tsenaben-dry zareo any amin'ny an-tanàn-dehibe.
Ankoatra ny fampielezana sy fanaovana fampisehoana fanampiny amin'ny haino aman-jery amin'ity tetik'asa ity, nanaovan'ny mpitoraka blaogy topimaso ihany koa ny fomba fiainan'ireo tantsaha any Sitio Cantipla, Tuanan, Tanànan'i Cebu. Crossroads, ohatra, dia variana tamin'ny fomba fambolena organika.
Tsy nitsahatra ny naheno ny teny hoe “ORGANIKA” aho teny an-dàlana ary tsoriko fa tsy haiko mihitsy izay dikan'io teny io eo amin'ny sehatry ny fambolena. Tamin'izahay tany dia afaka nanontany ireo mpamboly ny mombamomba ny fambolena sy ny kojakoja. Tena gaga aho tamin'ilay toerana – legioma maro sy fankan-javatra. Ny fahalalàna azoko no tsara indrindra tamin'izany.
Tamin'ny tafatafa tamin'ireo mpamboly legioma any Cantipla, i Vernon Go dia miresaka momba ny olan'ireo tantsaha raha ny fifandraisana eo amin'ireo mpanjifa sy mpaninjara .
Ny olana… dia ny niakaran'ny vidim-bokatra hidangana noho ny fisian'ny mpanera. Fa mbola ratsy noho izany ny tontolon'asan'ny mpamboly izay mampanontany tena anao hoe, “Nahoana no mahantra ireo tantsaha any Filipina?” Tsy dia vaovao loatra ity fomba fandraharahana vaovao ity, nahomby ny firenen-kafa tamin'io, ka nahoana isika no tsy toy izany? Amin'ny alalan'ny Kumprahan SuperMerkado, hanampy ireo tantsaha hivoatra izany ary koa hampirisika ireo mpanjifa hividy ireo Legioma Organika Vaovao amin'ny vidiny avy any amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana.
McCoolot.com dia manoritsoritra ny toerana nanaovana ny fitsidihana toeram-pambolena sy fiompiana.
Ny olona sasany miantso azy hoe ilay Baguio kelin'ny tanànan'i Cebu. Tsy nahita toerana kanto noho izany aho – mangatsiatsiaka ny toerana na dia efa mitataovovonana aza, rivo-baovao sy toerana fakàna aina lavitra ny trano. Manan-karena legioma sy zana-boninkazo.
Sarin'ireo fitaovam-pambolena avy amin'i Photoblogger.
Ary The Photoblogger dia naneho hevitra momba ny tsy fahampian'ireo fitaovam-pambolena ampiasain'ireo tantsaha.
Iray amin'ireo zavatra voamariko momba ireo toeram-pambolena dia ny fomba nentin-drazana mahazatra iasàna ny tany. Manjary manontany tena aho hoe afaka mianatra fomba vaovao ve ireo mpamboly hanatsaràna ny vokany. Tokony hanan-karena i Filipina raha ireo vokatra ara-pambolena no resahana. Manantena aho fa afaka hampiasa vola ny governemanta na dia kely aza mba hanatsaràna ireo fomba fambolena.
Taorian'ny nizakàna ireo làlan-dratsy sy mahery rivotra mankany amin'ilay toerana, i Maria Eleanor Valeros avy ao amin'ny The Freeman dia nahita fa na ireo lehiben'ny tantsaha aza dia mizara izany hevitra izany.
Aladin Pagatpat, lehiben'ny toeram-pambolena sy fiompiana SUFALTRAS ahitàna mpiasa 50 dia nanamarika fa raha afaka vatsiana “tracteur” kodiarana efatra ry zareo hanampiana ny fambolena an-tsisiny any amin'ireo tany mikitaontaona miampy efitra fampangatsiahana hitahirizana laisoa, tsaramaso baguio, voatabia ary atsal (“poivron”), dia izany no ho fanampiana lehibe manaraka hitsinjovana ny hampatanjaka ireo mpamboly sy hampavitrika ny any ambanivohitra.
“ Raha misy efitra fampangatsiahana, dia hiampy andro maromaro kokoa ny fitehirizana vokatra indrindra ny laisoa,” hoy izy nanampy.
Na dia dimampolo taona mahery taorian'ny nahazoana fahaleovantena tamin'ny fomba ofisialy aza, mbola mijanona ho firenena taraiky sy mifototra amin'ny fambolena i Filipina ka na ny sehatry ny orinasa na ny fitaovam-pifandraisana sy fitaterana dia saika vokatry ny fampiasam-bola avy any ivelany avokoa izay mitodika kokoa amin'ny filàn'ny vahiny noho ny filàn'ny firenena.
Azo antoka fa ireo ezaka toa ny “Kumprahan Supermerkado” dia ahafahana manatsara ireo fiainan'ireo vondrom-piaraha-monin'ny tantsaha voafaritra. Nefa ny famahàna ny olana momba ny fanavaozana ara-pambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra amin'ny ankapobeny sy manerana ny firenena dia mbola mijanona ho iray amin'ireo nofinofin'ny vahoaka Filipiana hatry ny ela.